मोदिलाई यूग पुरुष किन नभन्ने ? - MeroReport
Posted by Namaskar Shah on August 5, 2014 at 12:48am in Have your Say
नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्धले मनको अध्याँरो हटाए ।हामी यति नजिक छौं, नेपालमा हावा चले भारतमा शीतल हुन्छ, यहाँ घाम लागे उता गर्मी । पानी र जवानी कहिल्यै टिक्दैन, पानी पहाडबाट तल झर्छ, जवानी पनि उमेरसँग ढल्किहाल्छ, सदियौं यो पूरानो कहावत हामीले बदल्नु छ । वा हरेक शव्दमा दम, हरेक बाक्यमा उत्प्रेरणा, बोलिमा उत्साह र दुरदर्शिता । मोदिलाई यूग पुरुष किन नभन्ने ? Tags:
Permalink Reply by Prakash Lamichhane on September 3, 2014 at 3:32pm प्रश्न जायज छ, यसमा बहस किन नगर्ने त ! ▶ Reply